Hlola iMacau - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eMacau
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeMacau
Bukela ividiyo mayelana neMacau
Hlola iMacau iphinde yabhalwa nangokuthi iMabalao, isiFunda Esikhulu Sokulawula (i-SAR) sePeople's Republic of China. Itholakala ngaphesheya kwesigodi sasePearl River kusuka i-Hong Kong, kuze kube i1999 Macau kwakuyinsimu yaphesheya kwePortugal. Enye yezindawo ezinabantu abaningi emhlabeni, iMacau ikhiqiza imali eningi kusuka ekugembeni kunanoma ikuphi emhlabeni, kufaka phakathi imali ephindwe kasikhombisa imali eyenziwe yi- “The Strip” ku- Las Vegas.
IMacau ibingelinye lamakoloni ase-Europe okuqala e-Asia nelokugcina ukuhoxiswa (i-1999). Ukuhamba edolobheni elidala wawungazenza ukholwe ukuthi uku-Europe - uma imigwaqo ingenabantu nabantu nezimpawu ngesiShayina, okungukuthi. Abantu basePutukezi nabaseMacanese bayaqhubeka nokulondolozwa kodwa, njengoba bekulindelekile, iningi labantu lingabomdabu baseChina.
Ngaphandle kwedolobha uqobo, iMacau ifaka iziqhingi zaseTaipa naseColoane, ezixhunyaniswe neMacau ngamabhuloho futhi komunye nomunye ngomgwaqo, manje osuhlanganiswe eCotai Strip.
IMacau ayifani neze nehlobo elishisayo nobusika obuthambile. Izivakashi kufanele ziqaphele ukuthi izivunguvungu zivame ukushaya kusukela maphakathi nehlobo ziye e-Autumn ezingavimba imisebenzi eminingi lapho.
Ngekhulu le-16th, iChina yanikeza iPortugal ilungelo lokuzinza eMacau ngokushintshana nokucacisa indawo yamaphasi ngaphansi kokuphathwa okuqinile kwaseChina. IMacau kwakuyindawo yokuqala yokuhlala yaseYurophu eMpumalanga Ekude.
I-China ithembise ukuthi, ngaphansi "kwenqubo eyodwa" yezwe, izinhlelo ezimbili - iMacau iyizwe elifanayo neChina yezwe, kepha inezinhlelo zayo zokubusa. Njengomakhelwane bayo iHong Kong, iMacau ayisenayo nentando yeningi ephelele futhi abantu bendawo bavame ukucabanga ukuthi kunokulawula noma ukuthonya okuningi okuvela Beijing (izwe elilodwa, izinhlelo ezingaphansi).
Eminyakeni yamuva nje, umnotho weMacau usukhuphuke ngokushesha ngenxa yokuhlinzekwa kwamalayisense okugembula. Izinkulungwane zezivakashi zivakashela iMacau usuku nosuku, ikakhulukazi zivela ezweni laseChina nezindawo ezingomakhelwane. Izinga lokuphila eMacau selikhule njengomphumela, futhi manje selisondele kwamanye amazwe aseYurophu. Umkhakha wabavakashi ubuye wahluka - esikhundleni samakhasino; IMacau iphinde yathuthukisa amasayithi ayo omlando, amasiko kanye nokudla.
IMacau ihlukaniswe ngokwendawo zaba izifunda ezintathu: peninsula kanye neziqhingi ezimbili. Kodwa-ke, ukuphinde kwakhiwe kabusha kwendawo ephakathi kweTaipa neColoane kudale isifunda sesine saseCotai.
Macau Peninsula. Isifunda esisenyakatho kakhulu esixhumeke ezweni laseChina. Kuyisiko lemisebenzi eminingi yezivakashi futhi kugcwele abantu.
Isiqhingi eseningizimu peninsula, sitholakala ngamabhuloho amathathu. Yisikhungo esikhulu sokuhlala futhi indawo esikuyo iMacau's Airport Airport.
Umugqa womhlaba othengiwe kabusha phakathi kweColoane neTaipa, namakhasino amasha akhuphukayo (njengeVenetian, ikhasino elikhulu kunawo wonke emhlabeni).
Isiqhingi eseningizimu impela, sakhiwa kancane kakhulu kunezinye izifunda ngenxa yezwe laso elinezintaba. Inamabhishi amabili, imizila eminingana yokuhamba ngezinyawo kanye nendawo yokuphumula. Futhi kuyindawo yemidlalo yegalufu yokuqala yeMacau.
Iminyaka eminingi, indlela ejwayelekile yokufika eMacau yayiwukundiza iye eHong Kong isikebhe ngesikebhe iye eMacau. Namuhla, iMacau iba yindawo ephansi yezindiza, futhi abanye manje sebefika eMacau ukuze kamuva baye eHong Kong.
Isikhumulo sezindiza saseMacau International siseduze neShere of Taipa Island. Inezindawo eziyisisekelo nama-aerobridges ambalwa.
Ama-cycle rickshaws (i-triciclo noma i-riquexó) aluhlobo lokufa olufayo, yize abambalwa besazulazula lapho bezungeza izivakashi njenge-terminal yesikebhe neHhotela Lisboa. Amanani ayaxoxiswana.
Ukuqashwa kwezimoto akuyona inketho ethandwayo eMacau enikezwe ubukhulu bendawo enkulu yabantu nosayizi omncane. I-Avis inikezela ngezinsizakalo zokuqasha imoto eMacau futhi unenketho yokuqasha imoto umshayeli noma ngaphandle komshayeli. Imigwaqo ivame ukugcinwa kahle futhi nezimpawu eziqondayo zikuzo zombili ngesiShayina nesiPutukezi. Ngokungafani nezwe laseChina, izimvume zokushayela zamazwe omhlaba zamukelwa eMacau, futhi ukuhamba kwezimoto ngakwesobunxele lomgwaqo nezimoto eziningi zihamba ngakwesokudla idrayivu (ikakhulukazi ngenxa yamathonya aqhamuka kumakhelwane i-Hong Kong).
Izilimi ezisemthethweni zeMacau ziyisiCantonese nesiPhuthukezi.
IsiCantonese siwulimi olukhulunywa kakhulu eMacau. IMandarin ayikhulunywa kabanzi, yize iningi lendawo liyakwazi ukukuqonda ngezinga elithile. Abasebenzi abasebenza emahhotela amakhulu nokuheha izivakashi ngokuvamile bazokwazi ukusebenza kahle eMandarin.
IsiNgisi sikhulunywa iningi labasebenzi abaphambili embonini yezokuvakasha. Cishe yonke iminyuziyamu namakhasino anezisebenzi ezithile ezinesiNgisi esihle, njengoba kwenza amahhotela amaningi, izitolo nezindawo zokudlela, ikakhulukazi lezo ezisezimakethe eziphezulu. Kodwa-ke, isiNgisi asikhulunywa kabanzi ngaphandle kwezindawo eziphambili zabavakashi, ikakhulukazi ezikhungweni ezinakekela isigaba sabantu abasebenzayo, uzothola ukuthi iningi labantu aliguquki esiNgisini.
Yaziwa kakhulu ngokugembula, iMacau inezinto eziningi ezikhangayo futhi igcwele ngomkhathi, sibonga amakhulu eminyaka yokuhlangana phakathi kwamasiko aseYurophu nawaseShayina.
IMacau yindawo ethokozisayo yokuhambahamba nje njengoba le ndawo igcwele amasonto, amathempeli, izinqaba nezinye izakhiwo ezindala ezinomxube ojabulisayo wezimpawu zamaPutukezi nezesiShayina. Ngaphandle kwezakhiwo, kukhona futhi namakhulu emigwaqo ecishe ibe mncane engxenyeni endala yeMacau lapho abantu beMacau beqhuba khona amabhizinisi futhi besebenza. Uma ubukhulu babantu bufika kuwe, thatha ikhefu futhi ujabulele izingadi eziningana ezinhle noma ulibangise kulesi siqhingi.
Enye yezinto ezithokozisayo ongazibona eMacau yisithombe seBodhisatta Avalokitesvara eseduze nolwandle eduze kwaseSands Casino naseMGM Grand. Yize eyisithixo saseChina, lesi sithombe siseYurophu ngokusobala ekwakheni futhi sifana nezifanekiso zeNkosazana uMariya esingazithola eYurophu.
I-Rua da Tercena iyindlela ethandwa kakhulu yobuciko, i-antique, kanye neyomgwaqo wezikebhe eMacau, okukude nethrekhi eshaywayo nezixuku ezimbalwa zabavakashi baseChina kanye nomlingiswa omningi. Itholakala eduzane naseSt Paul, ngemuva kweSenado Square.
Futhi uma isiko akuyona into yakho, kukhona iMacau tower ngokubukwa okumangalisayo nemidlalo ye-adventure, noma iFisherman's Wharf yokujabulela imisebenzi ethile yepaki-yezitolo nokuthenga.
Vakashela indawo eseCotai iphinde yabuyiselwa indawo yayo ukuze ibone ukuguqulwa kwayo kube yi- “Las Vegas Strip of the East”. IVenetian idume kakhulu nayo VeniceIzitolo ezinkulu ezithengisiwe ezinezitolo zemifula ezihamba phakathi, futhi okwamanje iyikhasino enkulu kunazo zonke emhlabeni.
UMuzi Wamaphupho iyikhasino enkulu enezitolo ezinkulu zemfashini, ividiyo yamahhala ethi 'bubble', amahhotela amathathu nombukiso wemidlalo yaseshashalazini abiza kakhulu emhlabeni. 'Endlini Yokudansa Amanzi' isiteji siqukethe amachibi amahlanu okubhukuda ama-Olimpiki. Abasebenzisi banikeza imigqa embalwa yangaphambili yamathawula wethameli. Ukuvalwa kwamahhala kusuka ekuphumeni kwesikebhe esiyinhloko main njalo.
Ingxenye enkulu yeMacau Peninsula yakhelwe indawo ye-UNESCO World Heritage futhi izakhiwo ze-25 nezindawo ezikule ndawo zithathwe njengezinokubaluleka kwamasiko nangokomlando.
Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokumboza izinto zokwenziwa ukwenza isekethe ye-Macau Heritage Walk. Izakhiwo Zamagugu, Sao Paulo I-Cathedral, i-Fort ne-Macau Museum konke kusondelene komunye nomunye futhi kungabonakala kalula lapho umuntu noma umuntu engakwazi ukubamba isikhathi sokuhamba kwamagugu.
ITaipa Village neColoane Village, okuhlala kuyo abanye abadobi, kuyajabulisa nezitolo zabo zangezikhathi zobukoloni nezindlu ezihamba ngemigwaqo emincane.
IMacau ineminyuziyamu eminingana. Iminyuziyamu esemqoka, njengeMacau Museum, iseMacau Peninsula yize kuneminyuziyamu emibili eTaipa - iMnyuziyamu weTaipa kanye nomlando weColoane kanye nomnyuziyamu weTaipa izindlu.
Imvelo yeMacau isukela ezivandeni ezincane zasemadolobheni ezinemithombo, iziqengqelezi ziya kugcwala, ihlathi elinamahlamvu aminyene nezindlela ezinde zokuhamba.
Ukugembula kuyimboni enkulu kunazo zonke yaseMacau, futhi ukulayisha amabhasi nsuku zonke kusuka ezweni laseChina ukuzama inhlanhla yabo. Ngaphezu kwalokho, abaningi beHong Konger bafika ngezimpelasonto ngenhloso efanayo. Iminyaka eminingi, i-Casino Lisboa yeCasino yayidume kakhulu futhi iyindawo eyaziwa kakhulu ngabantu abangaphandle kweMacau, kodwa iyavuselelwa yiSands Casino evulelwe i2004. Noma kunjalo, i-Lisboa yangempela yaseCasinoa isakufanele ukuvakashelwa njengoba amahholo ayo aqukethe izinto zakudala eziningi ezibukwayo ezivela eqoqweni langasese lokugembula i-tycoon uStanley Ho. Amakhasino amaningi atholakala eceleni komthombo wamanzi ohlangothini oluseningizimu yeMacau Peninsula. ENyakatho yeLisboa imicu enamakhasino amaningi amancane, amahhotela amaningi nemigoqo, kanye nezindawo zokudlela ezimbalwa. Lokhu kungaba ngenye yezindawo ezithakazelisa kakhulu zeMacau; phakathi kwezinye izinto inendawo yokudlela enhle yaseNdiya kanye namaPutukezi amaningana. Amakhasino amasha nawo avulelekile endaweni ebizwa nge-NAPE eningizimu ye-Avenida de Amizade, kufaka iWynn Macau neSand Macau.
Konke lokhu kuzobhekwa yintuthuko entsha kwiCotai Strip, eyenziwe "iLas Vegas Strip yaseMpumalanga". Amakhasino amakhulu kunawo wonke emhlabeni, iVenetian Macao, yavula iminyango yayo ngo-Agasti 2007 kanye neDolobha Elincane lamaDokodo elalingelona elincane e-2009, nokuningi okusazofika. Kukhona amakhasino ambalwa eTaipa, kufaka phakathi iCrown Macau.
Kukhona ama-ATM atholakala kuwo wonke amakhasino nasezikhungweni ze-Forex ukuze ushintshe imali yakho. Abagembuli kumele okungenani babe neminyaka eyi-21, bavunyelwe ukudlala.
Enye indlela ethandwayo yokugembula eMacau ukugijimisana greyhound, lapho abantu bebheja khona ezinjeni ngendlela efanayo neyabantu abaningi bakwamanye amazwe ababheja ngamahhashi
Ngokuphakama kwamamitha we-233, igxuma le-bungee ligxuma lisuka eMbhoshongo weMacau, ligcinwe futhi lisebenze yi-AJ Hackett liphakeme kakhulu i-2nd emhlabeni. Kanye ne-bungee, umuntu angazama futhi ukugxuma kwe-Sky, okunokufana nokuxhuma kepha kuvikelwe kakhulu futhi akubandakanyi ukuwa kwamahhala, nokuhamba esibhakabhakeni, okuvikelwe endawenikazi ejikeleza ukuzungeza phansi. Imisebenzi yokugibela kanye neyokukhuphuka kwezemidlalo nayo yenziwa ngaphansi komphambili wesakhiwo.
Amabhishi amabili iMacau - iHac Sa (isihlabathi esimnyama) neCheoc Van (bamboo bay) - atholakala ngaseningizimu yesiqhingi saseColoane. Zithandwa kakhulu futhi zivame ukwenziwa ngabantu bendawo nezivakashi, ikakhulukazi ngempelasonto.
Ngaphandle kwamabhishi, kunezichibi ezimbalwa zokubhukuda zomphakathi kuyo yonke iMacau. Onke amahhotela asezingeni eliphakeme nawo anamachibi okubhukuda.
Izintaba / Ekubuyiseleni
Kukhona amathuba okuhamba ngezinyawo nokuhamba ngamabhayisekili eziqhingini eziseTaipa naseColoane. IColoane Trail ingeyokuqala futhi yinde kakhulu eMacau. Lo mzila udlula amamitha we-8100 futhi uzungeze indawo ephakathi nesiqhingi seColoane ngesilinganiso samamitha we-100 ngaphezulu kogu lolwandle, efanelekile kubahambi abanolwazi abathuthukisa izindlela zabo zokuziqondisa. Ngakho-ke, kuyindlela eyaziwa kakhulu futhi esetshenziswa kaningi eMacau.
Kunesikhungo sokuncibilika kwezinga lomhlaba wonke elakhiwa e2005 kuma-East Asia Games eMacau Dome endaweni yaseCotai. Kukhona ne-Bowling alley eMacau eduze kwaseCamoes Garden / emathuneni amaProthestani.
Ukuthola imali kulula impela njengoba kunamabhange nama-ATM (imishini yemali) cishe kuwo wonke umgwaqo. Abaphethe ikhadi lesikweletu kwelinye lamanethiwekhi aphesheya ngeke babe nezinkinga zokuhoxisa imali.
Amakhadi wesikweletu e-Visa ne-MasterCard amukelwa kabanzi ezindaweni zokudlela ezinkulu, ezitolo nakwindawo yokugcina izikebhe kodwa abanye abathengisi bangadinga inani eliphansi lokuthenga.
I-Tipping ngokuvamile ayenziwa. Ezitolo zokudlela ezigcwele, kubekwa inkokhiso yensiza futhi lokho kuthathwa ngokuba yiphuzu.
Ngenkathi amakhasino amasha we-mega ethule iMacau ngenjabulo yezitolo ezinkulu ezigcwele ukungagcwali, imigwaqo yedolobha ezungeze amakhasino amadala iseyindlela eyinqaba yokubuka iwashi, ubucwebe kanye nezitolo zemithi zaseChinese, konke okuhlose ngakho konke ukukhulula abagembuli abanenhlanhla kusuka ukunqoba kwabo. Ukuthola izikhumbuzo ezinambithekayo ngakho-ke kungaba yinselele ngokumangazayo, yize imigwaqo ephakathi kweLargo do Senado namanxiwa eSt. Paul kanye neRua da Tercena, inokusatshalaliswa kobuciko bendawo nezitolo zasendulo.
Ukwenza izivumelwano ezitolo ezincane kungenziwa, kuvame ukusebenza kumodeli yomthengisi ecaphuna intengo, umthengi enza imisindo “hmmm” bese umninisitolo ehlisa intengo kancane. Umdlalo ophelele wokugijimisa okugcwele awunqabile, njengoba izitolo eziningi zasendulo zithengisa izinto ezifanayo ngokuqondile ngamanani afanayo.
Ngolwazi lwesitolo saseNtshonalanga, bhekisa eNew Yaohan e-Ave Doutor Mário Soares n˚90. Kune-bakery nesuphamakethe ephansi ye-6th. Kwamanye amagumbi kukhona imfashini, amakha nakho konke okunye ongakulindela esitolo somnyango, kodwa lindela amanani aphakeme kakhulu kulokho ojwayele ukukuthola.
IMacau idume ngezindawo zokudlela ezinhle kakhulu, okudla okuyingqayizivele nemigoqo ehlukahlukene. Ngaphezu kwakho konke, leli dolobha lidume ngokudla kwaseMacanese naseChinese.
Ukudla kwesiPutukezi (i-cozinha portuguesa), okulethwe ngabathengisi bayo abangamaPutukezi, kuyinhliziyo enempilo, enosawoti, nokuqondile. Ngenkathi zokudlela eziningi zithi zisebenzela izinto, imali yokuthenga eyiqiniso ngokugcwele ikhawulelwa ezindaweni zokudlela ezimbalwa ezisekupheleni, ikakhulukazi iqembu elisekupheleni kweningizimu-ntshonalanga yePeninsula.
Izitsha ezijwayelekile zamaPutukezi zifaka:
i-pato de cabidela (idada elinegazi), inyama yedada eboshelwe egazini ledada, uviniga kanye namakhambi, wakhonza nelayisi; kuzwakala futhi kubukeka sengathi kuyesabisa, kepha kuhle kakhulu uma usenziwe kahle
i-bacalhau (i-cod enosawoti), ngokwesiko yayikhonza namazambane kanye nama-veggies
i-caldo verde, isobho lamazambane, isosi se-kale nososiwe we-chourico
feijoada (isiphuzo sezinso sezinso), isidlo saseBrazil esivamile eMacau
i-pastéis de nata (ama-tarts amaqanda), icrispy ne-flaky ngaphandle futhi ithambile futhi imnandi ngaphakathi
Ukudla kweMacanese kwadalwa lapho amathonya amaPutukezi nawaseChinese exutshaniswa nezinongo ezazilethwa zivela e-Afrika naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia ngabadayisi, futhi izindawo zokudlela eziningi ezikhangisa ukudla “kwamaPutukezi” empeleni zithola izitsha eziningi zaseMacanese.
Amakhukhi e-almond. Amakhukhi ama-Chinese omile ama-Chinese anongiwe i-almond. Isikhumbuzo esikhulu seMacau, sine-compact, sihlala isikhathi eside yingakho sathengiswa kakhulu yonke indawo.
IGalinha à africana (inkukhu yase-Afrika). Inkukhu ye-Barbequed eyenziwe nge-spiri piri-piri.
IGalinha à portuguesa (inkukhu enesitayela sePutukezi). Inkukhu ku-coconutty curry; ngaphandle kwegama, lesi akusona isidlo sesiPhuthukezi, kodwa ukusungulwa kweMacanese kuphela.
Ingulube yengulube ye-bun. Uhlobo lweMacanese lwe-hamburger, igama elihle lisho konke: lucezwana lwengulube esanda kuthosiwe (imvamisa ngamathambo ambalwa amathambo asele) ngesibalo sopelepele obekwe ngaphakathi kwe-bun esanda kubhakwa.
Beef Jerky. Umswakama omningi futhi omusha kune-jerky ejwayelekile, futhi okumnandi kakhulu. Kutholakala kalula emgaqweni oholela emaRuins of St Paul, lapho abathengisi bezokuqhubekisela amasampula wamahhala lapho udlula ngomdlandla omkhulu. Qiniseka ukuzama konke ngaphambi kokukhetha oyithandayo kakhulu!
Inyama egayiwe enama-amazambane athosiwe, enikwa irayisi elimhlophe.
Konke okushiwo, ukudla okuzikhethela eMacau kuseyisiCantonese emsulwa. Imigwaqo ephakathi nendawo yeMacau igcwele ukudla okulula okuhlinzekwa izitsha zerayisi nezodli (yize amamenyu evame kuphela ngesiShayina), kuyilapho wonke amahhotela ekhasino elibiza usawoti awo anendawo yokudlela yasolwandle yaseCantonese yasolwandle lapho ungaqhumisa khona izindondo zakho zokugembula ku-abalone noshaka isobho lokuqeda.
Iqoqo lokudlela elikhulu kunawo wonke ePeninsula, lapho lisakazeke khona esifundeni sonke. ITaipa manje iyindawo enkulu yokuya kulabo abafuna ukudla kwamaPutukezi neMacanese futhi kunezindawo eziningi zokudlela zesiqhingi esidumile.
Iwayini lePutukezi elinengozi efanelekile litholakala kabanzi. Njengakwezinye izindawo eChina, kodwa, abantu bendawo bathanda ukukhetha ama-cognacs kanye ne-whisky. IMacau Beer itholakala kabanzi emabhodleleni we-330 ml ezitolo ezinkulu. Kukhona nomnyuziyamu wewayini ongathola ithuba lokunambitha izinhlobo zewayini ezi-50
Kunobusuku obunzima obuxakile eMacau. Kunemigoqo ehlukahlukene nemishayo eceleni kwe-Avenida Sun Yat Sen eduze kwe-Kum Iam Statue kanye neCultural Center lapho ungaba nobusuku obuhle ngaphandle. Abantu bendawo, ikakhulukazi phakathi kwabantu abancane, bakhetha ukuhlangana nabangane babo kumakhofi wesitayela aseNtshonalanga noma izindawo ezisebenzela 'itiye le-bubble'. 'I-Bubble tea' imvamisa itiye elinongiwe lezithelo linikezwa ngamabhola e-tapioca futhi lingakhonzwa lishisa noma libanda. Izitolo enkabeni yedolobha (eduze naseSenado Square) zivame ukuvulwa kuze kube sebusuku kakhulu futhi zivame ukugcwala. Amakhasino asephenduke into enkulu kwezokuzijabulisa, enikeza ukusebenza kwejwayelekile yamazwe omhlaba (ukubhuka kusengaphambili okwelulekiwe) nezitolo ezinkulu zokuthenga zalabo abanentshisekelo yokuzama inhlanhla yabo emishinini. Kulabo abafuna ukuzikhipha ngokwabo ngemuva kwesikhala sokuthenga, kunama-spas atholakala cishe kuwo wonke amahhotela ahlonishwayo.
Isimo sezulu esibukhali
Kukhona ubungozi bezichotho, ikakhulukazi phakathi kukaJulayi noSepthemba. Uhlelo lokuxwayisa ngesivunguvungu lukhishwe yiMacao Meteorological ne-Geophysical Bureau esisakazwa kabanzi kuthelevishini nasemsakazweni:
Imbangela eyodwa engalindelekanga yokugula eMacau ukushintshwa kwezinga lokushisa okukhulu phakathi kwehlobo lwe-35 ° C olunomswakama sezulu sasehlobo ngaphandle nezakhiwo ezinomoya omngeni we-18 ° C. Abanye abantu bathola izimpawu ezibandayo ngemuva kokuhamba phakathi kwalokhu okweqisa kabili; akuyona into engjwayelekile ukugqoka sweta noma isembozo ukuze uhlale ufudumele ngaphakathi, futhi ngenxa yalokho kuvame ukuba yiseluleko esihle sokuphatha into enemikhono emide lapho ulindela ukuhambela izindawo ezinomoya omude isikhathi eside.
Ngenkathi amanzi empompo ephephile ukuphuza (ukunambitha eceleni), iningi labantu bakhona libilisa noma lihlunge amanzi alo noma lithenge amanzi ashibhile asemabhodleleni, okunconywa nokuthi ukwenze.
Abantu baseMacau ngokuvamile banobungane nabantu bakwamanye amazwe (uma bethola iqiniso lokuthi iMacau yayinamakhulu eminyaka yokubusa kwamakoloni amaPutukezi, abantu bendawo, ngisho nabantu asebekhulile basetshenziswa ukuhlala ndawonye nabaseNtshonalanga). Kodwa-ke, ungacabangi ukuthi abantu bendawo bakhuluma isiNgisi (noma isiPhuthukezi) kanye nemishwana embalwa ebalulekile yesiCanton ihlala ilusizo.
Lapho uvakashela amathempeli amaShayina inhlonipho eyisisekelo kufanele iboniswe, kepha ukuthatha izithombe kuvunyelwe futhi akudingeki ucele imvume inqobo nje uma kungekho sikhangiso esibonisa ukungathumeki.
Ukuziphatha okuphuza ngokweqile noma ukudakwa akubekezeleleki eMacau.
IMacau inokubekwa okungcono kakhulu kweselula. IMacau inamanethiwekhi we-GSM 900 / 1800 ne-3G 2100.
IMacau inekusakazwa mahhala kwe-Wi-Fi kulo lonke idolobha. Yaziwa njengohlelo lwe-wifigo. Ungasebenzisa futhi insiza ye-wifigo ebethelwe. Igama lomsebenzisi lithi "wifigo" kanti iphasiwedi "wifigo".